Nhau - Kunzwisisa kweforoma banga: kugadzira uye kuenzanisa zvakanakira nekuipira kweakasiyana banga anofa
▶ Kunzwisisa chishandiso muforoma
Kune anopfuura zana marudzi emapanga maererano nejasi kona, kuoma kwejere uye blade, zviyo zvebanga uye yekumusoro kugadzira tekinoroji ye blade uye blade.
Iko kuvandudza uye kugadzirwa kweye chishandiso muforoma kunoenderana nokunzwisisa kwakadzika kwevatengi vechigadzirwa kudiwa ruzivo uye zvinhu. Ruzivo urwo vatengi vanoda kuratidza rwunoratidzwa pane iyo dhizaini dhizaini, saka isu tinofanirwa kuongorora dhirowa kutanga, kushandura zvinodiwa nevatengi kuita kwavo kuita kuyerera uye kuratidzwa kwechigadzirwa chekupedzisira.
Dhizaini yekugadzira maitiro inoda kuti mainjiniya ave nekunzwisisa kwakadzama kwezvinhu. Chimwe chinhu chakakosha kuve nekunzwisisa kwakanaka kwekuita kwemuchina wekambani yedu. Zvinogona kutaurwa kuti kunzwisisa zvinhu uye kunzwisisa kugadzirwa mashandiro emachina ndiwo hunyanzvi hunyanzvi hunofanirwa kuve neinjiniya.
Ziva izvo zvinoda vatengi, ziva zvivakwa zvezvinhu, batanidza kugadzirwa mashandiro emachina edu, uye kuvaka mamiriro ekugadzira mupfungwa. Kugadzirisa sei matambudziko? Mhinduro ndeye maitiro ehunyanzvi aunogadzira, uye chishandiso chimuumbwa chishandiso chakakosha kushandura zvaunofunga kuti zviitike. Zvingave zvinogoneka
▶ Laser banga banga
Yakadzika kudzika ablation ye banga template inoitwa nekushandisa iyo yakasimba simba ye laser, kuitira kuti uwane chinangwa chekuisa checheka.
Chii chinonzi QDC muforoma?
Iyo QDC kufa inotora iyo modhiyo yemubatanidzwa mubatanidzwa, inoshandisa iyo yekuveza banga kufa kana iyo ngura banga kufa kuisa mune iyo hardware kufa base yekurova nekuchenesa; Nekuti iyo kufa inogona kutsiviwa zvinoenderana zvakasiyana kufa kufa kucheka zvido, uchifunga zvakanakira chishandiso kufa uye kunyatsoita uye kugadzikana kweiyo kufa.
Kuenzanisa iyo chaiyo madhirowa eakasiyana banga inofa: (Japan, zvakajairwa, girazi kurapwa) zvinhu zvakasiyana zvinoda akasiyana mashizha kuti uwane anodhura mhedzisiro. Kune zvakare banga banga, zvinhu, rakasununguka chipanji pamutsai wevatatu zvakare akakosha kwazvo. Zvimwe zvinhu zvinoburitsa zvakaenzana mutsauko mushure kufa kucheka. Kugadzira chishandiso chakanaka kufa, zvinodawo kuti chishandiso chimuvhu fekitori ive nekunzwisisa kwehunhu hwezvinhu, uye wozogadzira inoenderana yekugadzirisa tekinoroji.
▶ Kugadziriswa nekugadzirwa kwechigadzirwa chishandiso
Isu tinotora iyo yekugadzira maitiro eiyo etching kufa semuenzaniso kuti unzwisise kugadzirisa uye kugadzira kweye chishandiso chimuvhu
Maitiro kuyerera etching kufa
1 .order kugamuchira
Dhipatimendi rinogamuchira rinoona nekutambira maemail evatengi uye kutaurirana nevatengi pane zvinodiwa pakugadzira, kotesheni uye nguva yekuendesa. Mushure mekusimbiswa kwevatengi, iyo fomu yekugadzira dhizaini ichavhurwa uye iyo setetetting ichatangwa. Chekupedzisira, iyo yekudhirowa ichaitwa ive yakasarudzika firimu yeiyo ngura, iyo inozoendeswa kune iyo ngura dhipatimendi pamwe neiro rebasa.
Mushure mekutambira iyo firimu uye basa odha, iyo ngura dhipatimendi inosimbisa iyo ukobvu hweplate, kukwirira kwebanga uye mhando yezvinhu, uyezve kunamatira firimu, rinodhindisa nekurifumura. Chekupedzisira, prototype yeiyo mold inoratidzwa mushure mekurapa kwemvura. Kana iro basa rekuratidzira risina kuitwa nemazvo, zvinodikanwa kugadzirisa chimiro usati wapinda muchina we corrosion. Mushure mekusangana nezvinodiwa, zvinogona kutorwa kunze. Mushure mekushambidza coke dhipoziti, inogona kutumirwa kune inotevera dhipatimendi. Iyo corrosion department idambudziko rekugadzirisa dhipatimendi yeforoma.
Mushure mekugamuchira yakaoma machining, iyo yekuveza dhipatimendi inoiisa mumuchina wekugadzirisa mushure mekuona kuongorora uye kusimbisa. Nekuda kwemusiyano wehukuru hwekufa, kuoma uye kureba kweturu yekushandisa, nguva yekugadzira yakasiyana. Kazhinji, chishandiswa chakuvhe chinotora maawa 1-4, uye yakakosha chishandiso chakuvhuvhu chinoda maawa masere kana kunyange anopfuura maawa makumi maviri nemana kuti apedze CNC machine. Mushure mekupedzwa kwekuongorora, mutungamiri wechikwata anogona kutumirwa kuQC mushure mekunge zvatemwa kuti hapana dambudziko.
QC inokonzeresa kuongororwa kwehukuru hwekufa, chishandiso pamucheto, nezvimwewo, uye iri basa rekuita mushumo wekuongorora, uye wotumirwa kunopisa kurapwa.
5. zvinoenderana nemutengi kubaya zvinhu zvakakamurwa kuita nzira mbiri dzekugadzirisa
Kana icho chinhu chisina chinamatira, chinogona kurapwa neyakajairika kupisa kurapwa. Kuwedzera pakurapa kwekupisa kuti uwedzere kuomarara, iyo yekuzvinamatira zvinhu inofanirawo kufukidzwa neTeflon. Teflon inogona kuita kuti zvigadzirwa zvekurova zvisanamatira kune iyo kufa, asi nekuda kwenzvimbo yakasarudzika, kupfeka kweTeflon hakuzokanganisa kupinza kwefa. Mushure mekunge mushumo wekuongorora wavharwa nemutariri, iyo die inogona kurongedzwa uye kutumirwa.
6. girazi kurapwa
Kurapa uku kunogona kubvisa zviyo zvidiki padivi pemucheto webanga refa, kuzadzisa girazi mhedzisiro, uye kunyatso gadzirisa dambudziko re burr neguruva kana chigadzirwa chiri kubaya nekudhirowa, uye voita chigadzirwa mupendero wakatsetseka uye wakatsetseka. Iyo yakakodzera kubaya uye yekucheka zvigadzirwa zvine zvakakwirira zvinodiwa. Parizvino, kambani yedu ndeya girazi banga uye ndeyaiye ega mugadziri mu mainland China.
Post nguva: Oct-19-2020
Laser Kufa, Dongo-Kudonhedza Kudonhedza Michina Inofa, Mask Michina Die, Mirror Surface Inotema Die, Simbi Yakafa Kunyora, Auto-Chinyorwa Kuzadza Chinyoro Kufa,